नेकपाका नेता हेमन्तप्रकाश ओलिसहित ९ नेता गिरफ्तार ! अब के गर्छन विप्लव ? – On Khabar
नेकपाका नेता हेमन्तप्रकाश ओलिसहित ९ नेता गिरफ्तार ! अब के गर्छन विप्लव ?
March 23, 2019 onkhabarComment(0)
काठमाडौं, ९ चैत । विप्लव नेतृत्वको पार्टीका स्थाई समिति सदस्य तथा मध्य केन्द्रिय कमाण्ड ईन्चार्ज हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन पक्राउ परेका छन् ।
प्रहरीको विशेष ब्यूरो, महाशाखाको टोली र काभ्रे प्रहरीले सुदर्शनसहित ९ जनालाई शुक्रबार राति काभ्रेबाट पक्राउ गरेका हो ।
नेता सुदर्शनसहित नेताहरु शंकर अधिकारी, धर्मराज राजबाहक, रामकृष्ण खतिवडा, विजय श्रेष्ठ, ललित लामा, सन्जीव कार्की, वेद घिमिरे र लोकेन्द्र खड्का पक्राउ परेकाे महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका निमित्त प्रमुख एसपी केदार ढकालले बताए ।
केही दिनअघि काभ्रेको काफल डाँडामा प्रहरीले फायरिङ गरेकाे थियो । काठमाडौंबाट गएको अपराध महाशाखाको टोलीले त्यो बेला हेमन्तलाई पक्राउ गर्न असफल भएको थियो ।
त्यस क्रममा प्रहरीले नेकपाका चार कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको थियो ।सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएसँगै प्रहरीले गाउँगाउँ पुगेर सो पार्टीका नेताहरुलाई प्रकाउ गरिरहेको छ ।
रुपन्देहीमा नेकपाको अभियान निरन्तर, सैनामैनामा पार्टी सदस्यको प्रशिक्षण सम्पन्न ।
January 5, 2019 January 5, 2019 onkhabar
Spread the love186 186Shares अनखबर पौष २१, बुटवल । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी रुपन्देहीले आफ्नो अभियानलाई निरन्तरतामा चलाईरहेको छ । अभियानको क्रममा जिल्लाव्यापी रुपमा पार्टी सदस्य, शुभचिन्तक तथा सहिद, बेपत्ता र घोईते योद्धाहरुलाई भेटघाट तथा संगठन निर्माण र सुदृढ गर्ने तथा जनताका समस्याहरु बुझ्ने र समाधानको लागि जनपरिषद्बाट पहल गर्ने कामहरु भैरहेको जिल्ला सेक्रेटरी अमर […]
Spread the love अनखबर पुस ६, दाङ दाङमा विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना हुँदा २२ जनाको मृत्यु भएको छ भने १५ जना घाइते भएका छन् । घटनास्थलमा ामा २१ जनाको शव फेला परेको छ भने अस्पतालमा एकजनाको मृत्यु भएको छ । घटनास्थल बाट ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख एवं डिएसपी प्रेमबहादुर शाहीले २१ जनाको शब घटनास्थलमा […]
गंगामाया न्याय माग्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुगिनभने के हुन्छ ?
February 18, 2019 February 18, 2019 onkhabar
Spread the love अनखबर फागुन ६ गंगामाया अधिकारीले बनाइन् पासपोर्ट, न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्दै काठमाडौं । लामो समयसम्म नेपालमै न्यायका लागि संघर्ष गर्दा पनि नपाइएको भन्दै गंगामाया अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्ने भएकी छन् । उनले आइतबार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहदानी बनाएकी छन् । छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै लामो समय अनसन […]
नेकपाद्धारा प्रतिरोध कारबाही अगाडी बढाउने चेतावनी, सुरक्षाकर्मीमाथी आक्रमण गर्ने योजना नभएको स्पष्ट । (विज्ञप्तीसहित)
खुसी हुने देशमा नेपाल सय औं स्थानमा, हेर्नुस कुन देश कति खुसी ?
‘विप्लव’ खोज्दै सेना गाउँ-गाउँ पस्यो, देशमा अघोषित युद्ध सुरु ।
बिप्लवका कार्यकर्तामाथी प्रहरीको गोलि चल्न सुरु, प्रहरीले नै दियो युद्धको संकेत ।
नेकपाको पार्टी कार्यालय “रातो घर”मा प्रहरी हस्तक्षेप, ताल्चा तोडि ब्यानर र झण्डाहरु हटाईयो ।
हत्या गर्ने योजना भ्रामक : विप्लव, प्रचण्ड त्रसित र ढाट भएको पुष्टि ।